नेपाल प्रहरीले चुनाव सम्बन्धि सबै गतिविधि एआईजी पोखरेलको नेतृत्वमा गर्ने - सुनाखरी न्युज
नेपाल प्रहरीले चुनाव सम्बन्धि सबै गतिविधि एआईजी पोखरेलको नेतृत्वमा गर्ने
Posted on: January 13, 2021 - 3:25 pm
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले चुनाव केन्द्रित शान्ति सुरक्षाको तयारी सुरु गरेको छ । अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा शान्ति सुरक्षाका लागि केन्द्रिय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरी काम थालेको वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
समिति ३७ सदस्यीय रहेको र आबश्यकता अनुसार प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारी परिचालित हुने उहाँले बताउनुभयो । समितिले निर्वाचनमा चाहिने साधन, स्रोत, आर्थिक व्यवस्थापन देखि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिको विषयमा तयारी गर्नेछ । यही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरीले नेपाल सरकारसँग निर्वाचनका लागि अपुग साधन स्रोत माग गर्ने पनि कुँवरले बताउनुभयो ।
समितिले निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धि नीति बनाउने निर्वाचन सम्बन्धी प्रहरीका हरेक गतिविधि यही समितिमार्फत हुने प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि गृहमन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षा रणनीति बनाएर आवश्यक तयारीमा जुट्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । गृहको निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीले आवश्यक तयारीका काम थालेको हो ।
१० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्ता छन् प्रावधान !
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो, किन भएन सरकारी खर्च प्रभावकारी ?
नेकपा प्रचण्ड- माधव समूहले घोषणा गर्‍यो तेस्रो चरणको आन्दोलन, यस्ता छन कार्यक्रम